Markabka Carnival Cruise Line-ka Mardi Gras ayaa markiisii ​​ugu horreysay ciyaaraya
Bogga ugu weyn » Warshadaha Maraakiibta » Markabka Carnival Cruise Line ee Mardi Gras ayaa markiisii ​​ugu horreysay soo ciyaaray Mareykanka
Markabka Carnival Cruise Line ee Mardi Gras ayaa markiisii ​​ugu horreysay soo ciyaaray Mareykanka
Mardi Gras wuxuu sanadka oo dhan ka shiraacan doonaa Port Canaveral, isagoo ku bixinaya safarro toddobo maalmood ah bariga iyo galbeedka Caribbean-ka.
Mardi Gras wuxuu markiisii ​​ugu horreysay ku xirtay Port Canaveral's Cruise Terminal 3
Mardi Gras waa markabkii ugu horreeyay ee dalxiis ee gudaha Ameerika oo ay ku shaqeyso Gaaska Dabiiciga ah ee Liquified
Mardi Gras wuxuu soo bandhigayaa daboolkii ugu horreeyay ee badda
Qalab Qalal QaadashadaMardi Gras, ayaa kulankeedii ugu horreeyay ee Mareykanka saakay yeelatay, iyadoo markii ugu horreysay ku xirtay Port Canaveral's Cruise Terminal 3, oo si gaar ah loogu dhisay markabkan oo ah kii ugu horreeyay ee Ameerika ka shaqeeya ee shidaalka dabiiciga ah ee Liquified Natural Gas (LNG). xeebta ugu horraysa ee badda.
Xorriyadda Carnival ee Xorriyadda Carnival iyo Xorriyadda Carnival waxay ku biireen Mardi Gras iyadoo sii maraysa kanaalka dalxiiska, iyadoo abuureysa albaab dhab ah oo xusuus leh oo ku habboon markabkan cusub ee beddelaya ciyaarta.
In ka badan 1,500 oo taageerayaal ah ayaa safan Jetty Park, oo ku dheggan Terminalka, si ay ugu soo dhoweeyaan Mardi Gras Xeebta Space, halka Damaashaadka Madaxweynaha Christine Duffy, Gudoomiyaha Carnival Corp. Micky Arison, Madaxa Carnival Corp. Arnold Donald, Carnival Corporation COO Josh Weinstein, iyo madaxa guud ee Canaveral Port Authority Captain John Murray, oo ay weheliyaan 300 lataliyaal xagga socdaalka ah, la-hawlgalayaal, marti sharaf iyo martisharaf, ayaa kaqeybqaatey soo dhaweyn soo dhaweyn ah. isagoo tilmaamaya xiisaha ay u qabto imaatinka Mardi Gras iyo saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha maxalliga ah.
"Mardi Gras wuxuu shan sano ku jiray sameynta, imaatinka maantana waa taariikh muhiim u ah shirkadeena iyadoo aan la xusin daqiiqad qiiro leh oo qof walba oo halkan jooga Carnival Cruise Line," ayuu yiri Duffy. Markabkani wuxuu siiyaa hal-abuurnimo iyo dariiqooyin badan oo martidayadu ku doortaan madadaalo waxaan hubnaa inay si dhakhso leh u noqon doonto qof ay marti u tahay. Markaan rajeyneyno inaan dib u bilaabi doonno howlihii martida, imaatinka Mardi Gras wuxuu astaan ​​u yahay xamaasadda iyo rajada aan ka qabno mustaqbalka Carnival Cruise Line. ”
“Muddo ku dhow afar sano waxaan si adag u shaqeynaynay isku diyaarinta Mardi Gras,” ayuu yiri Capt Murray. "Markii aan ku soo dhaweynayno markabkan cajiibka ah Port Canaveral, waxaan ku faraxsanahay inaan ku aragnay iyada oo ku sugan garoonkayaga quruxda badan ee Cruise Terminal 3."
Shirkaddu waxay hadda bilaabi doontaa hawsha ay ku xoojineyso shaqaalaha Mardi Gras ilaa koox buuxda oo ah 1,750 oo diyaar u ah inay abuuraan fasaxyo xusuus mudan martida kuwaas oo ku raaxeysan doona madadaalada ugu ballaadhan ee badda, oo ay ku jiraan nuqulkii ugu horreeyay ee markab ee barnaamijka TV-ga ee 'Family Feud'. , oo ka cuno in ka badan labaatan makhaayado oo leh goobo laga helo Guy Fieri, Emeril Lagasse, Rudi Sodiman iyo Sarkaalka Madaxa Madadaalada Shaquille O'Neal.